I-Mindustry: umdlalo wenqwelomoya okhuselayo wenqwaba | Ubunlog
I-Mindustry: umdlalo webhokisi yesanti yezokhuseleko
Ingqondo ngumdlalo wokhuselo wenqaba okhutshwe phantsi kwelayisensi ye-GNU GPL 3 iyafumaneka kwi-GNU / Linux, Android, Steam, macOS, kunye neWindows.
Umgaqo womdlalo kukuzama ukukhusela isiseko sakho kumaza ohlaselo iirobhothi ezilandelelanayo. Ngalo nto, izixhobo zemigodi kufuneka zikhutshwe emephini kunye nokwazisa ishishini eliyinyani elizimeleyo lezothutho kunye nonyango lwezixhobo: imigodi, iibhanti zokuhambisa, ukulungisa imizi-mveliso, iigridi zamandla kunye nemibhobho yeoyile.
Amaxesha amaninzi yinto nje yokubeka iinqaba emephini, kodwa nokuba zonke iinqaba ziyafana okanye akukho ndawo incinci kangangokuba akukho ndlela yokubeka indawo yokuphuhlisa.
Kodwa I-Mindustry, ithatha umxholo ngakumbi: Ngokubanzi, tshabalalisa iintshaba ngokuzenzekelayo ukuze ziqokelele amanqaku akuvumela ukuba wakhe iinqaba ezintsha okanye uziphucule. Apha izibonelelo zixhomekeke kumdlali ukuze azikhuphe emhlabeni kwaye azihambise, azicwangcise, azisebenzise njengezinto zokwakha kwaye ekugqibeleni azithumele kwinqaba.
Isiseko sivela kwindawo ukuya entlanjeni entlango yobomi bonke, kodwa apho kukho iidipozithi ezininzi zamalahle, ubhedu, ilothe, isanti, amanzi, ioyile nokunye.
Yima nzu kukho isiseko sotshaba esithumela rhoqo iidrones zayo ezindizayo nabakhasayo balungile ukutshabalalisa ngokungakhathali naluphi na uhlobo loomatshini abanobunkunkqele abazifumana kwii-radar zabo. Ke ngoko, ayisiyiyo indlela echazwe kwangaphambili yeeyunithi zotshaba ezilandelwayo.
Umzekelo, sinako ukwenza isigqibo sokuvimba inkanunu ethile ngobuchule sisebenzisa iindonga zetitanium ukunyanzela abahlaseli ukuba balandele indlela apho sibeke khona zonke izixhobo zethu zokudubula.
Kwelinye icala, lonke eli shishini lithatha indawo emephini kwaye ngenxa yoko lisengozini yokuhlaselwa ziirobhothi ezinempambano.
Kwakhona, makhe sithethe ngayo, ngamanye amaxesha kuyintloko yokwenyani ukufumanisa ukuba, umzekelo, ukufumana njani i-silicon ukubonelela ngenqaba, usazi ukuba ukwakha isiseko se-silicon, kufuna ukukhokelwa, kodwa nokuba isiseko sisebenzisa isanti namalahle njengempahla eluhlaza kwimveliso yesilicon.
Umbane kufuneka unikezelwe nakwisinyibilikisi, Efumaneka kumvelisi womlilo osebenza ngamalahle. Kwaye ngoku kuya kufuneka unxibelelanise yonke le mveliso kunye neqela leebhanti zokuhambisa, kwaye kuya kufuneka usebenzise ngokukhawuleza iibhlorho, iirouters kunye nezinto zokuhlela ukuze uqiniseke ukuba isixhobo ngasinye sifika kwindawo elungileyo (phantsi kwesigwebo sokuthintela yonke imveliso). Kwaye sisiqalo nje, kuba kuya kusiba nzima ngakumbi xa usongeza i-thorium kunye nezinye izinto eziphambili.
Inqaku elinomdla kukuba emva kokwakha ngokucokisekileyo ubunzima beendonga kunye neentlobo ezahlukeneyo zeenqaba ezidibeneyo kunye nezibane zokuphilisa, kunokwenzeka ukugcina iqela lezakhiwo njengecebo (schematics) kwaye uphinde uyisebenzise kwakhona ngaphandle kokubeka kwakhona isakhiwo ngasinye.
Elinye inqaku elinomdla kukuba kunokwenzeka ukuba udlale kwi-Intanethi ngokuchasene nabanye abadlali kumdlalo wesibini okanye wamashumi amane ananye.
Kukho umhleli wemephu, kwaye nangona ingekho ikhathalogu yemephu yesiko okwangoku, unokufumana uninzi lweProjekti yeNgxoxo.
Okokugqibela, tZininzi iinguqulelo ezikhoyo, kodwa andikabinalo ixesha lokujonga.
Uyifaka njani iMindustry kwi-Ubuntu kunye neziphumo?
Njengoko kukhankanyiwe ekuqaleni, iMindustry ngumdlalo weplatform ezininzi ukuze Singafumana abafakeli kuzo zombini iiWindows, iMac, iOS kunye ne-Android yomdlalo.
Kwimeko ye-Android, unokufumana umdlalo kwi-Playstore okanye kwi-F-Droid. Kwimeko ye-iOS, unokufumana umdlalo kwi-AppStore.
Kwelinye icala, kwimeko yeWindows, Mac kunye neLinux, kufuneka sityelele Indawo elandelayo apho siya kufumana khona iiphakheji ezichaziweyo.
Kwabo banomdla wokukwazi ukufaka lo mdlalo kwinkqubo yaboBanokwenza oko ngokulandela imiyalelo esabelana ngayo ngezantsi.
Kwimeko I-Linux sineendlela ezimbini zokufaka umdlalo, Enye yazo kukukhuphela ikhowudi yemvelaphi kunye nokudibanisa.
Enye indlela ilula ngoncedo lweephakeji zePlppak, ke le ndlela yeyona ilula kwaye ifuna kuphela ukuba inkxaso ifakwe.
Ukufakela umdlalo, vula nje itheminali kwaye uchwetheze oku kulandelayo:
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » Ubuntu » Imidlalo » I-Mindustry: umdlalo webhokisi yesanti yezokhuseleko
Isiphelo sendlela yeNautilus 3, isixhobo sokufaka i-terminal eNautilus
Jonga umyalelo, ezinye iindlela zokuyisebenzisa kwimisebenzi yemihla ngemihla